Istanbuul : Shir looga hadlayo xaaladda Suuriya oo ka furmaya – AwKutub News
Istanbuul : Shir looga hadlayo xaaladda Suuriya oo ka furmaya
By awkutubnews October 26, 2018
Leave a Comment on Istanbuul : Shir looga hadlayo xaaladda Suuriya oo ka furmaya
Magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga ayaa waxaa maalinta beri ah oo sabti ah ka furmaya shir looga hadlayo xaaladda dalka Suuriya gaar ahaan magaalada Idlib.
Shirkan ayaa waxaa marti galinaya madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayip Erdogan, waxana ka qeyb galay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb gali doona wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka Suuriya Staffan de Mistura.
Shirkan ayaa waxaa looga hadli doonaa colaadda ka jirta dalka Suuriya, heshiiska Idlib iyo dadaalka loogu jiro sidii xal loogu heli lahaa colaadda Suuriya.
Arrimaha kale ee shirkan xoogga lagu saari doono ayaa waxaa ka mid ah heshiiskii 17-kii bishii September dhaxmaray dalalka Turkiga iyo Ruushka kaasoo ku saabsanaa xaaladda magaalada Idlib.
Dalka Suuriya ayaa waxaa sannadkii 2011- ka bilowday banaabaxyo looga soo horjeedo dowladda Bashiir Al Asad,iyadoo markaas kadib ay soo ifbexeen kooxo mucaarad ah oo uu kamid yahay ururka Daacish kuwaasoo dagaal la galay dowladda Suuriya.
Tags: Caalamka Istanbuul Suuriya Wararka
Previous Entry Shirka Ururka Iskaashiga Islaamka Oo Muqdisho Lagu Qabanayo
Next Entry Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil oo booqasho ku tagey Wadan Carab ah